जापान, कम्फर्ट वुमेन र विली ब्रान्ट| The Margin Media
यति बेला फेरि जापान र दक्षिण कोरियाबीच यौनदासी (comfort woman) का बारेमा विवाद सुरु भएको छ । दक्षिण कोरियाको अदालतले जापान सरकारलाई कोरियाली प्रायद्वीप कब्जा गरेको बेला यौनदासी बनाइएका १२ जना महिलालाई ९१ हजार डलर क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ । जापान सरकारले यो आदेशप्रति खेद जनाउँदै भनेको छ हामी कुनै पनि हालतमा यो आदेश स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । जापान सरकारको भनाइअनुसार उसले दक्षिण कोरियाका युद्धसम्बन्धी सबै दाबीलाई १९६५ को सन्धि अनरूप भुक्तानी गरिसकेको छ।
को हुन् यौनदासीहरू ?
साम्राज्यवादी जापानले दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनु अघिदेखि अन्त्य नभएसम्म आफ्ना सैनिकलाई मनोरञ्जन दिन वेश्यालय खोलेको थियो । त्यसमा करिब ३ लाखदेखि ४ लाख महिलाहरुलाई यो काममा लगाएको थियो । तीमध्ये अधिकांश चीन, कोरिया र फिलिपिन्सका थिए । तर अरू जापान अधिनस्थ देशहरुका महिलालाई पनि कम्फर्ट वुमेनका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । ती देशहरु थिए- बर्मा, थाइल्यान्ड, भियतनाम, इन्डोनेसिया, हङ्गकङ, मकाउ आदि थिए । यो कामका लागि महिलाहरुलाई नर्सिङ र अन्य उद्योगमा काम गर्न भनेर झुक्याएर, सडकमा हिँडिरहेकाहरुलाई अपहरण गरेर ल्याइन्थ्यो । एकचोटि ती महिलाहरु सैनिक वेश्यालय पुगेपछि तिनीहरुको नारकीय जीवन सुरु हुन्थ्यो ।
एक जना कम्फर्ट महिला किम हाक सुन जसलाई १७ वर्षको उमेरमा जापानिज सैनिकहरुले राम्रो तलब पाउने कपडा फ्याक्ट्रीमा काम गर्न भनेर झुक्याएर वेश्यालयमा पुर्‍याएका थिए । उनलाई त्यहाँ पुर्‍याएको दिनदेखि नै उनीमाथि बलात्कार सुरु भयो, जुन कहिले रोकिएन ।
ती कम्फर्ट वुमेनहरु जो त्यो यातनाबाट बाँचेर फर्के उनीहरुको बाँकी जीवन पनि सुखद् रहेन । आफ्नै देशको समाजले पनि उनीहरुलाई अछुतको व्यवहार गर्‍यो, केही यौनरोगको जटिलताका कारण मरे र केहीले आत्महत्या गरे । जापानले आफूले युद्धको क्रममा कम्फर्ट वुमेन प्रयोग गरेको कुरा दसकौँसम्म अस्वीकार गरिरह्यो । तर जब १९८७ मा दक्षिण कोरियामा सैनिक शासनको पतन भयो र प्रजातन्त्र आयो । अनि मात्र दक्षिण कोरियाका पूर्व कम्फर्ट वुमेन र मानव अधिकारवादी कार्यकर्ताहरुले यो कुरा जोडदार रूपमा उठाउन थाले ।
९० को दशकको सुरुवातमा यो मामिला झन् चर्को रूपमा उठ्यो । अन्तत: सन १९९३ मा जापान सरकारले कम्फर्ट वुमेन प्रयोगसम्बन्धी आरोपलाई स्वीकार गर्दै माफी माग्यो । २०१५ मा जापान र दक्षिण कोरिया सरकारबीच यो मामिलाबारे सम्झौता भयो । जसअन्तर्गत जापानले यो अपराधका लागि माफी माग्दै जीवित रहेका कम्फर्ट वुमेनहरुलाई ८३ लाख डलर क्षतिपूर्ति दिन सहमत भयो । यो सम्झौतालाई दक्षिण कोरियाली पूर्वकम्फर्ट वुमेनहरूले मान्न अस्वीकार गर्दै भने हामीलाई पैसा होइन जापानको इमानदारीपूर्ण कानुनी जवाफदेहिता चाहिन्छ र यो सम्झौताले हाम्रो भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्दै उनीहरुले दक्षिण कोरियाको सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।
५ डिसेम्बर १९७० का दिन पश्चिम जर्मनीका चान्सलर विली ब्रान्टले पोल्यान्डको राजधानी वार्सास्थित नाजी यातना शिविरका सहिदहरुको स्मारकमा फूल चढाउँदा अचानक १ मिनेटसम्म घुँडा टेकेर उभिए । यो दृश्य देखेर सारा संसार स्तब्ध भयो । यो घटनाको एक वर्षपछि विली ब्रान्टलाई नोबेल पुरस्कारले सम्मानित गरियो । विली ब्रान्टले यो घटनाको बारेमा कहीँ कतै चर्चा गरेनन् । उनले वर्षौंपछि आफ्नो आत्मकथामा यो प्रसङ्गबारे लेखेका छन् (मलाई धेरैचोटि त्यो घटनाको बारेमा सोधियो, के त्यो योजनाबद्ध थियो ? 'होइन, त्यो योजनाबद्ध थिएन। म दसौँ लाख हत्याको बोझले थिचिएर जर्मनीको एतिहासिक खाडलको डिलमा उभिएको थिएँ । शब्दहरु असफल हुँदा मान्छेहरुले जे गर्छन् मैले त्यही गरेँ ।'